Obesara ntụ ntụ VS Ceilistat ntụ ntụ | Akwụ na-agwọ ọrịa steroid
/blog/nke a , Ibu/Obesara ntụ ntụ VS Ceilistat ntụ ntụ
Ihe na 12 / 01 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na nke a, Ibu.
Kedu oke oke ibu?
Ibu bụ ọnọdụ ebe mmadụ chịkọtara abụba dị ukwuu nke na ọ nwere ike inwe mmetụta dị njọ na ahụ ike ha .Ọ bụrụ na mmadụ dị arọ ma ọ dịkarịa ala, 20% dị elu karịa ya, a na-ewere ya dị oke oke. Ọ bụrụ na ụbụrụ ụbụrụ gị (BMI) dị n'etiti 25 na 29.9, a na-ewere gị oke oke. Ọ bụrụ na BMI gị bụ 30 ma ọ bụ karịa gị, a na-ewere ya dị oke.
Ibu oke bu ihe ndi na-eme ka a ghara igbochi uwa n'uwa, ya na onu ogugu na ndi okenye na umuaka. Na 2015, ndị okenye 600 (12%) na ụmụ 100 nde bụ ụmụaka. Ibu oke bu umuaka karia umuaka. Ndị ọchịchị na-ele ya anya dịka otu n'ime nsogbu ahụike ọha na eze kachasị njọ nke narị afọ 21st. A na-atụgharị anya n'ọtụtụ n'ime ụwa nke oge a (karịsịa na Western Ụwa), ọ bụ ezie na a hụrụ ya dị ka ihe nnọchianya nke akụnụba na ọmụmụ na oge ndị ọzọ na akụkọ ntolite ma ka dị n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Na 2013, Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike America na United States dị ka ọrịa.
Ihe kpatara oke uzuzu
Ibu oke ibu bụ ihe a na-ejikarị eme ihe site na njikọta nri dị oke oke, enweghị ọrụ ahụ, na mkpụrụ ndụ ihe nketa. A na-akpata ọnya ole na ole site na mkpụrụ ndụ ihe nketa, ọrịa endocrin, ọgwụ, ma ọ bụ nsogbu uche. Echiche nke ndị obese na-eri ntakịrị ma na-ebu ibu n'ihi na a na-akwado ngwa ngwa ngwa ngwa. Ná nkezi, ndị buru oke ibu nwere nnukwu ume mmefu karia ndi ogbo ha ha kwesiri ka ha jiri ike ha choro iji mee ka ndi mmadu buru ibu.
Nnyocha a na-atụ aro na ọ bụrụ na ịnọghị ụra zuru ezu ị nwere ike ịghọ nnukwu ọnụ abụọ. E mere nnyocha na Warwick Medical School na Mahadum Warwick. Ihe ize ndụ ahụ metụtara ma ndị okenye ma ụmụaka. Prọfesọ Francesco Cappuccio na otu nyochaa ihe akaebe na ụmụ 28,000 na ndị okenye 15,000. Ihe àmà ha gosipụtara n'ụzọ doro anya na nhụhụ ụra na-ebuwanye ibu ibu nnukwu ibu na ìgwè abụọ ahụ.
Ihe ize ndụ nke ibu ibu
A na-ejikọta oke anụ ahụ na ọrịa na ọnọdụ dị iche iche, karịsịa ọrịa obi na-arịa ọrịa obi, ọrịa 2, ọrịa mberede obstructive, ụfọdụ ụdị cancer, ọrịa ogbu na nkwonkwo na ụkwara ume ọkụ. N'ihi ya, a chọpụtawo oké ibu iji belata oge ndụ.
Kedu otu esi edozi nsogbu ibu oke?
A na-egbochi ibu oke ibu site na nchikota mgbanwe mgbanwe na nhọrọ onwe onye. Mgbanwe maka nri na ime ihe bụ ọgwụgwọ kachasị. Enwere ike ịdị mma mma nri site na mbenata oriri nke oriri na-esi ike, dịka ndị dị elu na abụba na shuga, na site n'ịba ụba nri nke eri eri. A pụrụ iji ọgwụ na-eri nri, iji belata agụụ ma ọ bụ belata abụba absorption.If nri, mmega ahụ, na ọgwụ adịghị irè, enwere ike igosipụta balloon ma ọ bụ ịwa ahụ iji belata afọ ma ọ bụ ogologo eriri afọ, na-eduga n'inwe mmetụta zuru oke ma ọ bụ ikelata ikike ịmịnye nri sitere na nri.
Ceilistat ntụ ntụ Oké ibu ibu
Ceilistat raw ntụ ntụ bụ ọgwụ ọjọọ na-efu na-ejikọta ọnụ na nri obere kalori. Ọ na-arụ ọrụ site na igbochi oke ụba nke abụba ka a ghara ịgbada ma tinye ya n'ahụ. A na - ekewa ọgwụ a dị ka onye na - emepụta lipase na ọ na - arụ ọrụ na usoro digestive ebe ọ na - egbochi ihe egbugbere ọnụ lipolytic a na - akpọ lipase. Akwukwo a bu ihe aru na-eji mee ka abuba di ocha. Ot'odi, mgbe a na-enye ogwu a n'akuku nri, o na ejiko ya na egbugbere ọnụ, si otú a gbochie ha imebi abuba. Ụdị nke a na-adịghị etinye mmiri na-eme ka ọ bụrụ nke a na-emeghị ka ọ bụrụ nke a na-emeghị ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ụbụrụ na-eme ka ụbụrụ na-ezughị oke ma belata abụba. Mgbe ejiri ya na nri calorie dị ntakịrị, ọ nwere ike inye aka melite ọnwụ ọnwụ ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrịa buru ibu ka ha laghachi azụ, si otú ahụ na-eme ka ohere ịnweta ọnwụ na-efu.
Ceilistat ntụ ntụ onunu ogwu
A na-enye usoro ọgwụ ahụ dị ka ihe nchịkọta capsules 60mg maka nchịkwa ọnụ. A na - eji ọgwụ na - eri nri iji jide n'aka na ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe nri a na - eri nri, nke mere na enwere ike iwepụ abụba sitere na nri ahụ n'ụzọ dị irè. Dọkịta gị ga-agwa gị ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ị ga-eji na ọgwụ ahụ ọ bụla, nakwa dị ka usoro a chọrọ kwa ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-agbaso ntụziaka ndị a. Ejila ihe karịrị dọkịta gị agwa gị ka ị were.
Ọ bụ ezie na Unilistat raw powder can help weightweight patients lose weight and therefore reduce the risk of diabetes or other serious conditions associated with obesity, gị dọkịta ga-adụ ọdụ na-eri nri obere kalori na-emega ahụ mgbe nile.
Nke a na-emetụta akụkụ nke ikpo ọkụ
Ndị ọrịa na-enye ọgwụgwọ maka oke ibu na Ceilistat ntụ ntụ nwere ike ịta ahụhụ site na mmetụta ndị dị na ya. Ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na nke a emee. E nyere ụfọdụ ihe atụ ebe a:
Steatorrhea (mmanụ ala)
Nsogbu ịchịkwa ntụgharị obi
Tags: ịzụta Ceilistat ntụ ntụ, ịzụta ibu ibu, Ceilistat ntụ ntụ, Ibu oke ibu
Mmezi nke nwoke na nwanyi mmekorita Raw Jinyang Alkali ntụ ntụ Mmetụta Lorcaserin: Lorcaserin ntụ ntụ ọ na-arụ ọrụ n'ezie maka oke abụba?